Igama elivamile: Thyme
I-Thyme ivela ezingxenyeni zase-Asia, e-Europe Yase-Europe naseMedithera eNyakatho Afrika.
Isitshalo se-Thyme sihlala isikhathi esiqinile futhi sikhula cishe ku-350 mm ukuphakama. Lesi sitshalo sikhiqiza amagatsha amaningi ohlangothini lwe-woody ukuze enze isihlahla. Amaqabunga asemnyama-aluhlaza okwesibhakabhaka, awuhlobo oluthile lwe-oval kanye ne-furry encane. Izimbali ezitholakala emathanjeni amagatsha esiqwini zingumbala ogqamile we-lilac.
I-thyme esheshayo neyomile isetshenziswa njenge-flavouring ye-culinary.
Kulimazwa futhi ekukhiqizeni amafutha abalulekile. Ngayo yonke i-kilogram ye-thyme entsha efaka inqubo ye-distillation, cishe ama-millilitre angu-8 kuya kwangu-10 amafutha abalulekile akhiqizwa. Amafutha abalulekile asetshenziselwa imithi njengendlela yokwelashwa kwemisipha futhi ukulawula ukucindezeleka kwegazi kanye ne-cholesterol.
I-Thyme ikhula kahle kakhulu enhlabathini egcwele kahle, enhlabathini enesihlabathi nge-pH ephakathi kuka-6.0 no-7.5.
Ngaphambi kokuba kwenziwe ukulungiswa kwenhlabathi kwenziwa isampula yomhlabathi okumela kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ebhokisithri ukuze kuhlaziywe kanye nezincomo zezakhi. I-Thyme inezimpande ezincane ezingajulile futhi izimpande zayo azivamile ukuba zikhule ngokujulile kunezingu-400 mm.
Umhlabathi kufanele udonswe ukuze ukhulule iphrofayli yomhlabathi ibe ngu-400 mm ukuqinisekisa ukudonsa okuhle. Lungisa amazinga we-pH ngokungeza i-lime uma inhlabathi iyasebenza futhi ingeza umquba noma umquba. Pula ungene emhlabathini ophezulu wama-300 mm cishe amasonto amane kuya kwahlanu ngaphambi kokutshala. Ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokutshala, faka izici zokulandelela kanye nomanyolo olinganiselayo wokutshala umhlabathi emhlabathini futhi ungangeni emhlabathini ophezulu ka-20 cm. Lokhu kuzosusa nanoma yikuphi ukhula okungase lubekwe. Faka ukuchelela bese utshala izithombo zakho ze-thyme
I-Thyme iyisitshalo esine-semi-evergreen esiqinile esitshala ezindaweni ezifudumele zaseMedithera futhi yenza kahle kakhulu emazingeni okushisa aphakathi kuka-20°C no-30°C. Kuyinto ebekezelayo frost once esungulwe. Ukushisa kwamazwe kufanele kube ngaphezu kuka-16°C ukuze kuhlume kahle. I-Thyme ingalinywa emazingeni lapho kukhona khona okungenani ama-500 mm wemvula isakazeka ngaphezu konyaka.
Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko ze-thyme ezikhiqizwa kwezohwebo: i-Citriodorus, i-Zygis ne-Varico. I-thyme evamile iyasetshenziswa ngokuyinhloko ngezinjongo zokugaya. I-Citriodorus inephunga elimnandi lase-citrus futhi i-Zygis isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile. Ama-Varico nawowawoyela, okhiqiza inani eliphakeme kakhulu.
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-200 ngakho-ke uma ukhetha okutshalayo kungcono ukuthola iseluleko se-extension extension yendawo kanye nochwepheshe bezitshalo zezinhlobonhlobo ezihle kakhulu endaweni yokukhiqiza kanye nenjongo yakho kanye nemakethe okubhekiswe kuyo.